ဆုေတာင္း | Rev.U Min Lwin
All posts tagged ဆုေတာင္း
ကမ္ဘာကျော်ခဲ့သော “စိန့်ဖရန့်စစ်၏ ဆုတောင်း”
Posted by ဦးမင်းလွင် on 27/06/2013
Posted in: တရားေဟာခ်က္.	Tagged: ဆုေတာင္း.	4 Comments
၁၁၈၂ ခုနှစ်တွင် အီတလီ နိုင်ငံ အစီစီမြို့တွင် ဖရန့်စစ်ကို မွေးဖွားလာခဲ့သည်။ သူ၏ ဖခင်မှာ အစီစီမြို့တွင် အလွန် ချမ်းသာ ကြွယ်ဝသော ကုန်သည် သူဌေးကြီး တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ဖရန့်စစ်သည် ငယ်စဉ် ကတည်း ကပင် စိတ်နှလုံး နူးညံ့ သိမ်မွေ့ပြီး ချစ်စရာ ကောင်းသူ တစ်ဦး ဖြစ်သောကြောင့် လူချစ် လူခင် ပေါများပါသည်။
သူ၏ အပေါင်း အသင်းများမှာ လူကုန်ထံများ၏ သားသမီးများဖြစ်သည်။ သူသည် စည်းစိမ် အပြည့်ဖြင့် အသက်ရှင် ကြီးထွား လာခဲ့သူဖြစ်သည်။ တစ်နေ့တွင် သူငယ်ချင်း များနှင့် ရယ်မော ပျော်ရွှင်နေခိုက် သူတောင်းစား တစ်ဦးသည် ငိုကြွေး အော်ဟစ်လျက် တောင်းရမ်းနေ သည်ကို မြင်တွေ့ လိုက်သည်။ ထိုခဏ ခြင်းတွင် သူသည် လွန်စွာ သနား ကြင်နာ မှု ဖြစ်လာ သောကြောင့် သူအိပ်ထဲမှ ရှိသမျှ ပိုက်ဆံ အားလုံးကို သူတောင်းစား၏ ခွက်ထဲသို့ ထည့်လိုက်သည်။ ထိုအပြုအမူကြောင့် သူငယ်ချင်းများ၏ လှောင်ပြောင်ဟားတိုက်မှုကို ခံစားခဲ့ရသည်။ ထိုအချိန်မှစတင်၍ ဆင်းရဲသူများ၊ ဒုက္ခရောက် နေသူ များကို မြင်တွေ့လိုက်သည့် အခါတိုင်း ရှိသမျှကို ပေးကမ်းလှူဒါန်း လေတော့သည်။ ထိုအခါ သူ၏ အိမ်သူ အိမ်သား များက ဖြုန်းတီး သူအဖြစ် လည်းကောင်း၊ ရူးသွပ်နေသူ တစ်ဦး အဖြစ်လည်းကောင်း ဆူပူကြိမ်းမောင်းကာ ပြစ်တင် စွပ်စွဲလေတော့သည်။
ထို့နောက်မကြာမီမှာပင် သူသည် နာတာရှည် ရောဂါတစ်ခုကို ခံစားရကာ ဖျားနာလေ တော့သည်။ ထိုရောဂါသည်ကြောင့် သူသည် သေခါနီး အခြေအနေ မျိုး ခံစားခဲ့ရလေသည်။ ထို့ကြောင့် ဖရန့်စစ်သည် သူ၏ သဘောသဘာဝ ထုံစံအတိုင်း သူ၏ အနာဂတ်နေ့ရက်များ အတွက် လမ်းပြမှု ရရန် ဆုတောင်းခြင်းကို အချိန်အများဆုံး အသုံးပြုခဲ့လေသည်။ ထို့နောက် ပြန်လည် ကျမ်းမာလာပါက အပြစ်ကင်းစင်ပြီး သန့်ရှင်း သော အသက်တာနှင့် အမှုတော်မြတ်တွင် ဆက်ကပ် အသက်ရှင်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက် ခိုင်ခိုင်မာမာ ချလိုက်လေတော့သည်။
ထို့နောက် ပြန်လည် ကျမ်းမာ လာသောအခါ သူ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အိမ်သား များကို ပြောပြလေရာ အားလုံးက အကြီးအကျယ် ဒေါသဖြစ်ပြီး လွန်စွာ စိတ်ပျက် သွားကြ လေသည်။ အိမ်သူ အိမ်သားများက မည်သို့ ဖျောင်းဖျ ပြောဆိုသည် ဖြစ်စေ သူ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း စတင် လုပ်ဆောင် လေတော့ သည်။ သူသည် တန်ဘိုး ကြီးလှသည့် သူ၏ အ၀တ်များကို စွန့်ပစ်လိုက်ပြီး စတင် အမှုတော် မြတ်တွင် ပါဝင်လေ တော့သည်။ သူ့ထံတွင် ရှိသမျှ အ၀တ် အထည်များကို လိုအပ်နေသူများကို ပေးလိုက်ပြီး လက်ထဲတွင် ရှိသမျှ ငွေများကိုလည်း လိုအပ်သူ များကို ပေးလှူလေ သည်။ သူ၏ အပြုအမူကြောင့် သူ၏ ဖခင်မှာ များစွာ စိတ်ပျက်ခဲ့လေသည်။ “ဒါတွေဟာ ဘုရားသခင်က မင်းကို ဖော်ပြ လိုက်တဲ့ ကျေးဇူးတော်တွေ လား။ ငါရဲ့ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမှုတွေကို မင်းက ဒီလို လမ်းဘေးက အလကားလူတွေကို ပေးပြီး ဖြုန်တီးနေတာကို ငါစိတ်ပျက်တယ်။” ဟု ပြောဆို ခံခဲ့ရလေသည်။
ဖရန့်စစ်၏ သူငယ်ချင်းများကလည်း လှောင်ပြောင် ရယ်မော ခဲ့လေသည်။ ဖခင်က နောက်ဆုံးတွင် သူ့ကို နှင်ထုပ်လိုက်လေတော့သည်။ ထိုအချိန်မှ စတင်ကာ ဖရန့်စစ်သည် လမ်းဘေးတွင်နေထိုင်သူများ ကဲ့သို့ပင် နေလေတော့သည်။ သူငယ်ချင်းဟောင်းများက သူ့ကို ခဲများ၊ ရွံ့ဗွတ်များဖြင့် ပစ်ပေါက် ခဲ့ကြသည်။ သူငယ်ချင်းများအားလုံးကို စိတ်ရှည် သီးခံခဲ့လေသည်။
အစီစီမြို့၏ တောင်းတန်းကြီးတစ်ခုမှ လှိုင်ဂူကြီး တစ်ခုတွင် နေထိုင်ခဲ့သည်။ ဖရန့်စစ်သည် (၂) နှစ်ခန့် ဆုတောင်းကာ နှုတ်ကပတ်တော်များကို ဆင်ခြင် လျက် နေခဲ့သည်။
သူ့ကို သနားကြင်နာသူများက အစာအစာများ ယူဆောင်လာပြီး သူ့ကို ကျွေးမွေးခဲ့သည်။ သို့သော် သူသည် ဘယ်သောအခါမျှ ကုန်အောင်မစားခဲ့ချေ။
ဖရန့်စစ်သည် အလွန်နှိမ့်ချသော နှလုံးသားဖြင့် အသက်ရှင်ခဲ့သည်။ သူသည် ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းထားသော ဖန်ဆင်ခံများ အားလုံးကို ချစ်မြတ်နိုးခဲ့သည်။ သူသည် ငှက်ကလေးများ၊ သစ်ပင် ပန်းမာန်များနှင့် သဘာဝ လောကကြီးကို ချစ်မြတ်နိုးခဲ့သည်။ သူသည် အားလုံးသော အခြေ အနေ မဲ့များကို ချစ်ခင်ခဲ့သည်။ တိရစ္ဆာန်ကလေးများကိုလည်း သူ၏ ညီအကို မောင်နှမပမာ ဆက်ဆံမှု ပြုခဲ့သည်။
ဖရန့်စစ်သည် တစ်ရွာဝင် တစ်ရွာထွက် ဘုရားသခင်၏ မေတ္တာတော် အကြောင်းကို ဟောပြော ခဲ့သည်။ တိရစ္ဆာန် ကလေးများ ကိုပင်လျှင် မချန်ဘဲ ဘုရား သခင် အကြောင်း ပြောပြသည်။
ဖရန့်စစ်သည် လူများကို သူနှင့် အတူ အမှုတော် မြတ်တွင် လက်တွဲ လုပ်ဆောင်ရန် ဖိတ်ခေါ်မှုပြုခဲ့သည်။ ထိုအခါ တစ်မြို့တည်းသားဖြစ်သော ဘားနဒ် ဆိုသူ လူချမ်းသာ တစ်ဦးက ဖရန့်စစ်ကို ဆက်သွယ်ခဲ့လေသည်။ ထိုသူသည် ပထမဦးဆုံးသော ဖရန့်စစ်၏ နောက်လိုက်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဘားနဒ် သည်လည်း သူ၏ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုများကို ဘုရားသခင်၏ ပလ္လင်တော်တွင် ပုံ၍ အပ်နှံခဲ့သည်။ အခြား (၁၁) ယောက်လည်း ဆက်သွယ် မှု ပြုခဲ့သည်။ ထိုအထဲတွင် ဖရန့်စစ်ကဲ့သို့ စည်းစိမ် ဥစ္စာများကို စွန့်လွှတ်ခဲ့၍ ကျန်မာရေး ချို့တဲ့သူများနှင့် အခြေအနေမဲ့များကို ဂရုစိုက်ခဲ့သူ ကလယ်ရာ ဆိုသူလည်း ပါဝင်သည်။ သူတို့ (၁၁) ယောက်သည် အီတလီ နိုင်ငံအနှံ့အပြားကို သွားရောက်ကာ မိမိတို့ ပိုင်ဆိုင်သော စည်းစိမ် ဥစ္စာ များကို ဝေငှ ပေးကမ်းလျက် တရားဟောပြောခြင်း၊ သွန်သင်ခြင်း၊ ကျန်မာစေခြင်းကို ပြုလုပ်ပြီး သူတို ရောက်လေရာတွင် ကောင်းကြီး မင်္ဂလာ များနှင့် ပြည့်ဝစေ လေသည်။
ဖရန့်စစ်၏ မေတ္တာတရားနှင့် ကြင်နာမှု သတင်း စကားများ အကြောင်းကို ဥရောပ တစ်ခွင်တွင် ပြန့်နှံ့ သွားလေသည်။ ဖရန့်စစ်ကိုလည်း စိန့်ဖရန့်စစ် (သန့်ရှင်းသူ ဖရန့်စစ်) ဟု အမည်ပေးရန် စိတ်အား ထက်သန်မှု ဖြစ်ပေါ် လာလေသည်။ လူများက သူ့ကို အစီစီမြို့၏ သနားစရာ လူတစ်ယောက် (A little poor man of Assisi) ဟု ခေါ်ဆို ခဲ့ကြ လေသည်။
စိန့်ဖရန့်စစ်သည် သူ၏ နောက်လိုက်များထဲမှ ရွှေးချယ်ကာ တောင်းရမ်းသူများကို ကူညီ ကယ်တင်ရေး အစီအစဉ် အဖွဲ့ကို တည်ထောင်ခဲ့လေသည်။ အဖွဲ့ဝင် များကိုလည်း ချစ်ခြင်း၊ နာခြင်း နှင့်အတူ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာ ကောင်းမွန်ရန် လည်း သစ္စာ ကတိ ပြုစေခဲ့သည်။ သူသည် ခရစ် သက္ကရစ် ၁၂၂၈ တွင် သူ၏ အသက် ၀ိညာဉ်သည် ဘုရားသခင် ထံသို့ ပြန်သွား ခဲ့လေသည်။
အောက်ပါ ဆုတောင်း ချက်သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် အလွန် ကျော်ကြားသော ဆုတောင်းချက် ဖြစ်ခဲ့ လေသည်။ ဖတ်ရသူ တိုင်း၏ နှလုံးသားတွင် တစ်စုံတစ်ရာ ခံစား သွားနိုင် ပါသည်။ ဘုရားသခင်ကို ချစ်မြတ်နှိး သောသူတိုင်း သူ၏ ဆုတောင်းချက် စာသား လေးများကြောင့် အသက်တာတွင် ဘုရားသခင် အတွက် အသက် ရှင်လို စိတ် ပြန်လည် ပြင်းထန် လာပါလိမ့်မည်။ ဖတ်ရှု ခွန်အားယူကြည့်ပါ။
ဒီကဗျာလေးကို မူရင်း အင်္ဂလိပ်လို ဖေါ်ပြလိုက်ပြီး အောက်မှာတော့ မြန်မာ ဘာသာ ပြန်ပေး လိုက်ပါတယ်။
အောက်ကတော့ မြန်မာဘာသာ ပြန်ဆိုထားချက်ပါ။
အကျွန်ုပ်ကို ကိုယ်တော့်ရဲ့ ငြိမ်သက်ခြင်းရဲ့ တန်ဆာပလာ ဖြစ်စေပါ။
မုန်းတီးမှုတွေ ရှိတဲ့အရပ်မှာ မေတ္တာမျိုးစေ့ ကြဲခွင့်ပြုပါ။
နာကျင်မှုတွေ ရှိတဲ့အရပ်မှာ ခွင့်လွှတ်ခြင်း မျိုးစေ့ ကြဲခွင့်ပြုပါ။
သံသယတွေ ရှိတဲ့အရပ်မှာ ယုံကြည်ခြင်း မျိုးစေ့တွေ ကြဲခွင့်ပြုပါ။
စိတ်ပျက်ခြင်းတွေ ရှိတဲ့အရပ်မှာ မျှော်လင့်ခြင်း မျိုးစေ့တွေ ကြဲခွင့်ပြုပါ။
မှောင်မိုက်ခြင်းတွေ ရှိတဲ့အရပ်မှာ အလင်းမျိုးစေ့တွေ ကြဲခွင့်ပြုပါ။
၀မ်းနည်းမှုတွေ ရှိတဲ့အရပ်မှာ ၀မ်းမြောက်ခြင်း မျိုးစေ့တွေ ကြဲခွင့်ပြုပါ။
ကျွန်တော်ဟာ နှစ်သိမ့်ပေးနိုင်သူကို အနှစ်သိမ့်ခံဖို့ရန် ရှာသောသူမဟုတ်ပါ။
နားလည်ပေးနိုင်သောသူကို နာလည်ခံပေးဘို့ရန် ရှာဖွေနေသောသူ မဟုတ်ပါ။
ချစ်တတ်သောသူကို အချစ်ခံဘို့ရန် ရှာဖွေနေသောသူ မဟုတ်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ ရရှိခြင်းသည် ပြန်လည်ပေးကမ်းရန်
ကျွန်တော်တို့ ခွင့်လွှတ်ခံရခြင်းသည် ပြန်လည် ခွင့်လွှတ်ရန်
ကျွန်တော်တို့ သေခြင်းအရာသည် ထာဝရအသက် ရဘို့ရန်
စာဖတ်သူ အယောက်တိုင်းကို ဘုရားသခင် ကောင်းကြီးပေးပါစေ။
Posted by ဦးမင်းလွင် on 23/04/2013
Posted in: တရားေဟာခ်က္.	Tagged: ဆုေတာင္း, ယာဗတ္.	Leaveacomment
ယာဗတ်၏ ဆုတောင်းကို ဖတ်ပါ။
ထိုအဆွေ အမျိုး၌ ယာဗက်သည် ထူးဆန်းသော သူဖြစ်၏။ သူ၏အမိက၊ ငါသည် ပြင်းစွာသော ဝေဒနာကိုခံ၍ ဤသားကို မြင်ရပြီဟု ဆိုလျက်၊ ယာဗက်အမည်ဖြင့် မှည့်၏။ ယာဗက်ကလည်း၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ကို အစဉ် ကောင်းကြီးပေး၍၊ ကျွန်ုပ်နေရာကို ကျယ်ဝန်းစေ တော်မူပါ။ အကျွန်ုပ်သည် ဘေးဥပါဒ် အနှောက် အရှက်နှင့် ကင်းလွတ်ပါမည် အကြောင်း၊ လက်တော်သည် အကျွန်ုပ် ဘက်၌ နေ၍ ကွယ်ကာ စောင်မ တော်မူပါဟု ဣသရေလ အမျိုး၏ ဘုရားသခင်အား ဆုတောင်းတတ်၍၊ တောင်းသောဆုကို ဘုရား သခင် ပေးသနား တော်မူ၏။ (၁ရာချုပ် ၄း၉-၁၀)
လူတိုင်းမှာ သက်သာခြင်း ဆိုတဲ့ နေရာလေး တစ်ခုတော့ ရှိကြ စမြဲပါ။ မိမိနှစ်သက်တဲ့ အပူချိန်တစ်ခု ရှိတတ်ကြပါတယ်။ မိမိအသက်တာ ထဲမှာ အခက်အခဲက လွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ နည်းစနစ်တွေကိုလည်း လူတွေဟာ အမြဲတစ်စေ လေ့လာနေ တတ်ကြပါတယ်။ လူအုပ် ကြီးထဲမှာ လူတွေဟာ သက်သာတဲ့ နေရာ တစ်ခုကို အမြဲတစ်စေ ရှာဖွေနေလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ အဲဒီလိုနဲ့ မှားယွင်းနေတဲ့ လူအုပ်ကြီးထဲကို ရောက်သွားပြီ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့တွေဟာ အခြေအနေမှား၊ နေရာမှား၊ လုပ်ဆောင်ချက်မှားတွေနဲ့ မသက်မသာ ဖြစ်ကြ ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ သက်သာခြင်း ဆိုတဲ့ နယ်မြေလေးရဲ့ အပြင်ဘက်ကို ရောက်သွားရင် အနည်းငယ် မသက်မသာ ဖြစ်လာ ပါတယ်။ အဲဒီနေရာ မှာ အမှားအယွင်းတွေတော့ ရှိမနေပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မသက်မသာတော့ ခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူတွေဟာ သက်သာ ကျေနပ် မှုတွေကို ရှာဖွေနေ ကြတယ်။ ဘယ်နေရာမှာ ကျေနပ်မှု ရနိုင်မလဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လူနေမှု အဆောက် အဦးတွေကို ပိုမို ကောင်းမွန်အောင် သက်သာအောင် လုံခြုံအောင် ဆောင်ရွက် ပြုလုပ်နေ ကြပါတယ်။
အလားတူပါဘဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဝိညာဉ်ရေးအသက်တာတွေ ပိုမိုကောင်မွန် ပြည့်စုံဘို့ လုပ်ဆောင်သင့်သည် မဟုတ်ပါလော။
သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ အမှား အယွင်းမဖြစ်တာ ရှိနိုင်ပါတယ်။ အလုပ်တွေကိုလည်း ကျေကျေ နပ်နပ် လုပ်နိုင်တယ် ဆိုပါစို့။ သို့သော်လည်း သင်ရဲ့ ကျေနပ် မှုတွေထဲမှာ ဘုရားနဲ့ တော့ မှားယွင်း နေတာကို တွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သင်ရဲ့ အိမ်မှာ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အဆင်ပြေ နေသော်လည်း သင်ဟာ ဘုရားသခင်နဲ့ အသက်ရှင်မှု မရှိဘူးဆိုရင်တော့ တစ်စုံတစ်ရာ အမှားရှိတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော် တို့ဟာ ဘုရားသားဆိုတဲ့ အခြေအနေမှာ အခြား ကျေနပ်မှုတွေနဲ့ အစား မထိုးသင့်ပါဘူး။ အစား မထိုးနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကျေနပ်မှု တွေနဲ့ ခြောက်သွေ့နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို သက်သေခံလို့ မရပါဘူး။
ကျွန်တော် တို့တွေဟာ ဝိညာဉ်ရေးရာ ကျေနပ်မှုများရှိတဲ့ နေရာတစ်ခုကို လှမ်းနေတယ်ဆိုသည့်တိုင်အောင် ကျေနပ်မှုတွေ မရနိုင်ဘဲ ဆက်လက် ချီတတ်နေ သူတစ်ယောက် ကတော့ ရှင်ပေါ်လုပါ။ ဖိလိပ္ပိ ၃း၁၂-၁၄ မှာ အဲဒီအကြောင်းကို ရှင်းပြထားပါတယ်။
ထိုသို့ ဆိုသော် အကျိုးကို ခံရပြီ၊ စုံလင်ခြင်း သို့ရောက်ရပြီဟု ငါမဆိုလို။ အကြင် အကျိုးကို ပေးခြင်းငှါ ခရစ်တော်သည် ငါ့ကိုကိုင်ဘမ်း တော်မူ၏။ ထိုအကျိုးကို ကိုင်မိခြင်းငှါ ငါပြေး၍ လိုက်သေး၏။ ညီအစ်ကိုတို့၊ ငါကိုင်မိပြီဟု ကိုယ်ကိုကိုယ် မထင် သော်လည်း၊ ငါပြုသော အမှုတခု ဟူမူကား၊ နောက်ကျ သောအရာတို့ကို မမှတ်ဘဲ၊ ရှေ့၌ရှိသော အရာတို့ကို လှမ်းကမ်း၍၊ ယရှုခရစ်အားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် အထက် အရပ်မှ ခေါ်တော်မူခြင်းနှင့် ဆိုင်သော ဆုကိုရခြင်းငှါ၊ ပန်းတုံးတိုင်သို့ ငါလိုက်ပြေး၏။ (ဖိလိပ္ပိ ၃း၁၂-၁၄)
တစ်ယောက် ချင်းစီရဲ့ ဝိညာဉ်ရေးရာ သက်သာမှုကို မျှော်လင့် တောင့်တသည်သာမက အသင်းတော် တစ်ခုလုံးရဲ့ သက်သာမှုကိုပါ တောင့်တ အသက်ရှင် နေသူတစ်ဦးပါ။ ဘုရားကျောင်း တတ်ခြင်းတွေ၊ အလှူငွေ ပါဝင်ခြင်းတွေ တိုးတက် ကောင်းမွန်နေ သည့်တိုင်အောင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အသက်တာမှာ အခြားစုံစမ်း ခြင်းတွေရဲ့ ကြားမှာ အသက်ရှင်ရတဲ့ အခြေအနေတွေ ရှိနေပါတယ်။ အသင်းတော် အတွက် ဆုတောင်း သင့်တာကို ဆုတောင်း မပေးတာတွေလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အခြားလူတွေကို အသင်းတော်ကို ခေါ်လာသင့်ပါလျှက် ခေါ်မလာတာတွေ၊ လုပ်သင်တဲ့ လုပ်ဆောင်မှု တွေမလုပ် တာတွေ၊ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အဲဒါတွေ လုပ်ဆောင်ဘို့ ခက်ခဲလှတာ တော့မဟုတ်ပါဘူး။ မိမိတို့ အတွက်တော့ အသင်းတော်ထဲမှာ ကျေနပ်စရာ ဖြစ်နေပေမဲ့ အဲဒီအထဲမှာ အသင်းတော်ဟာ ကျဆင်းနေပါ တယ်။ အချိန်တွေ ကြာလာရင်တော့ အဲဒီ အသင်တော်ဟာ သေဆုံးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသင်းတော်ဟာ ဝိညာဉ်ရေး တိုးတက်မှုတွေဟာ အသင်းသား တွေရဲ့ တိုးတက် ကြီးထွားမှု တစ်ခုပါ။ အသင်တော်တစ်ခုရဲ့ ပြဿနာဟာ ကျေနပ်မှု တစ်ခုပေါ်မှာ တည် ဆောက်ထားတဲ့ အခြေအနေပါ။
ကျေနပ် သက်သာမှု တွေထဲက ဖောက်ထွက်ဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအကြောင်း အရာကို လေ့လာဘို့ ယာဗက်ရဲ့ ဆုတောင်းထဲက အကြောင်း အရာလေး တွေကို ဖတ်ကြည့် ကြပါစို့။ ဒီနေ့ ဟောပြောမှုမှာ တစ်ယောက်ခြင်း စီတိုင်းကော၊ အသင်းတော်ကော ပါဝင်နေတယ် ဆိုတာကို ပြောပါရစေ။ ကျေနပ်မှု တွေထဲကနေ ဖောက်ထွက် ကြပါစို့။
(ဒီပုဂ္ဂိုလ် (ယာဗတ်) နှင့် ပတ်သက်ပြီး မှတ်သားစရာ အချို့ ရှိနေပါတယ်။ ယာဗတ်၏ အခြေအနေ၊ သူ၏ ဆန္ဒ ဘုရားသခင်နှင့် လျှောက်လှမ်းမှု အခြေအနေ များကို ဖော်ပြထား ပါတယ်။)
ယာဗတ်၏ အခြေအနေ (အခန်းငယ် ၉)
က။ သူ့ဘဝအသက်တာထဲက သူ့နေရာအနေအထား
၅ရာ ၁း၁ ကနေ ၄း၈ အထိ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ဇယားကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ ယာဗတ်အကြောင်းကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ ယာဗတ်ဟာ သူတို့လူမျိုးတွေထဲမှာ ထူးခြားစွာ မွေးလာကြောင်း ဖော်ပြထားပါ တယ်။ ယာဗတ်ဟာ အခြေအနေက သူ့ကို အမြင့်ကို ပို့ဆောင် ပေးလိုက်ပါ တယ်။ သူဟာ ကျမ်းစာထဲမှာ ရေးသားဖော်ပြချက် အရ အမှန် တကယ် ထူးခြားတဲ့သူပါ။
အပေါ် ထိပ်ကို ရောက်ရှိလာတဲ့သူတွေ ဟာ အနည်းစုပါ။ သူတို့ဟာ ထူးခြားတဲ့ သူတွေပေါ့။ အများ စုကတော့ ကျွန်တော်တို့ လို သာမန် လူတွေပါဘဲ။ သို့သော်လည်း သင်ဟာ အဲဒီအတွက် ဝမ်းနည်းစရာမလိုပါဘူး။ လူဟာ မွေးဖွားလာမယ်၊ ပြီးရင် သေဆုံးသွားတယ်ဆိုတာ ဓမ္မတာပါဘဲ။ အများ အားဖြင့်တော့ သူတို့ရဲ့ မှတ်တိုင်တွေဟာ သင်ချိုင်းက မှတ်တိုင်တွေပါဘဲ။
အချို့ လူတွေဟာ သေဆုံး သွားပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ နာမည် တွေဟာ ထပ်ကာ တစ်လဲလဲ ပြန်လည်ဖော်ပြခံရတယ်။ ဒါပေမဲ့ အချို့ဟာ တော့ တစ်ခါထဲ ပြီးသွားကြ ပါတယ်။ နောက်ထပ် (၁၀) နှစ်ကြာရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီနေရာမှာ ရှိမရှိဆိုတာ မသေချာပါဘူး။ ဒီလောက ကြီးထဲက ထွက်ခွာသွား ကြတဲ့အခါ လူအချို့သာ မှတ်တိုင်လေးတွေ ချန်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီအထဲက အနည်းဆုံးလူတွေသာ ထာဝရကအတွက် အမှတ်တရ အချို့ကို ထားနိုင် ကြတာပါ။
ကျွန်တော်တို့ဟာ ဘယ်တော့်မှ ကျေနပ်မနေသင့်ပါဘူး။ ဘုရားသခင်ဟာ ကျွန်တော်တို့ကို အံ့သြဘွယ်ရာ ခေါ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ ထူးခြားတဲ့ လက်ဆောင် တွေကို ပေးသနားတော်မူခဲ့တယ်။ ၁ကော ၁၂း၇-၂၆ ကိုဖတ်ကြည့်ပါ။ ကိုယ်တော် ပေးအပ် သောအရာဟာ ကျွန်တော်တို့ဟာ လူတွေရဲ့ အပေါ်မှာ ဘုရားသခင်ရဲ့ ဘုန်းတော် အဖို့အလို့ငှါ အသက်ရှင်ဘို့ ဖြစ် ပါတယ်။ အချို့လူတွေဟာ ခြားနားစွာ ရပ်တည်ခွင့်ရကြပါတယ်။ သင်ဟာ ဘယ်လိုဘဲ ရပ်တည်နေပါစေ၊ ဘုန်းတော် အတွက် ဖြစ်စေပါ။
ခ။ သူ့ဘဝထဲက ပြဿနာ
သူ့ကို သူရဲ့ အမေက ယာဗတ်လို့ နာမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ “ငါဝမ်းနဲမှု၊ နာကျင်မှု၊ ဒုက္ခထဲက မွေးဖွား လာတဲ့သား၊ သူဟာ “နာကျင်မှု ခံစားရမည့်သား” လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါ တယ်။ နာမည်တွေဟာ အခြေအနေကို ဖော်ပြနေ တာကို သိကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အသက်ရှင်မှုကို မြင်ရလို့ ပတ်ဝန်းကျင် ကနေ အလိုလို နာမည် ကင်ပွန်းတပ်ပြီး သားဖြစ် တတ်ကြ ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နာမည်ဟာ ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ သည်ဖြစ်စေ အရေးမကြီးပါဘူး။ အခုချိန်မှာ သင်တို့ဟာ ခရစ်တော်နဲ့ အသက်ရှင် နေပြီဖြစ်လို့ အရာရာကို ကျော်လွှားနိုင် တော့မယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ထား စေချင်ပါတယ်။ အတိတ်က ချည်နှောင် မှုတွေကို ချေဖြတ် နိုင်ဘို့ အတွက် ခွန်အား တန်ခိုးတွေ ရှိနေပါပြီ။ ယခင်က ကျွန်တော်တို့ဟာ မည်ကဲ့သို့ အသက်ရှင်ခဲ့ သည်ဖြစ်ပါစေ။ မိသားစု မည်ကဲ့သို့ ဖြစ်သည် ဖြစ် ပါစေ၊ ကျွန်တော် တို့ဟာ ထိပ်ကို တတ်လှမ်းဘို့ သေချာနေပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့အတွက် သေချာတဲ့ ဂုဏ်သတင်းတွေ ရှိနေပါပြီ။ ကျွန် တော်တုို့ဟာ ဘယ်တော့မှ နောက်ကျန်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့မှာ အစွမ်း သတ္တိတွေ ရှိနေပါပြီ။ ဒါဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ တန်ခိုး တော် ဖြစ်ပါတယ်။ (၁ကော ၁၅း၁၀) ငါ့အထဲမှာ ရှိတဲ့ ဘုရား တန်ခိုးတော်က လုပ်ဆောင် တယ်လို့ ပြော ပါတယ်။
ဘုရားသခင်ဟာ သူကြိုက်တဲ့သူကို သူကြိုက်သလို ဖြစ်စေချင်သလို လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ဘုရား ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ ယာကုတ်ကို ကြည့်ပါ။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ လိမ်လည်လှည့်ဖျားသူ လို့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူရဲ့ နာမည်ကို ဣသရေလ ဟူသော အမည်ကို ပြောင်းလဲ စေခဲ့ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ် ကတော့ ဘုရားသခင်နှင့် အတူရှိတဲ့ မင်းသားလေး ပါလို့ အဓိပ္ပါယ် ရပါတယ်။
ဂ။ သူ့ဘဝထဲက နေထိုင်မှုပုံစံအသွင်
ယာဗတ်ဟာ ထူးဆန်းသော သူတစ်ဦး ဖြစ်တယ်။ သူဟာ ညီအကို ဆွေမျိုးတွေက လေးစားအတု ယူရသူ တစ်ဦးဖြစ်တယ်။ ယာဗတ်ဟာ ဘာလဲဆိုတာ ကျမ်းစာမှာ ရှင်းလင်းစွာ ဖေါ်ပြထားခြင်း မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူဟာ ဆုတောင်း တတ်သောသူ တစ်ဦးဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် သေချာတာကတော့ ယာဗတ်ဟာ ဘုရားရဲ့ လူမှန် တစ်ဦးပါ။ သူဟာ ဘုရားသခင် အတွက် အသက်ရှင် နေသူ တစ်ဦး ဖြစ်ကြောင်း သိနိုင်ပါတယ်။ သူဟာ ဘုရား အတွက် အမြဲတစ်စေ ယဇ်ပူဇော် နေသူတစ်ဦးပါ။ (ရောမ ၁၂း၁-၂)
ယာဗတ်က ချမ်းသာ ကြွယ်ဝဘို့ အမြဲတမ်း ဆုတောင်းပါတယ်။ ယာဗတ်ဟာ အချက်နှစ်ချက်ကို ဆုတောင်းပါတယ်။ ပထမအချက်က ကောင်းကြီးရဘို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ ဒုတိယအချက်က နယ်မြေကျယ်ဝန်းစေဘို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ ယာဗတ်ဟာ ရှိတဲ့ အခြေအနေကို ကျေနပ်နေတဲ့သူ တစ်ဦးမဟုတ်ပါဘူး။ ယာဗတ်ဟာ အချက်နှစ်ချက်ကို လိုချင်ပါတယ်။
ယာဗတ်က ဘုရားသခင်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ဘို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
ယာဗတ်က ဘုရားကောင်းကြီး ခံစားရဘို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
ယာဗတ်က တန်းခိုးခံစားဘို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
ယာဗတ်ဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ ကွယ်ကာမှုရဘို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
ယာဗတ်နှင့် ဘုရားသခင်၏ ပံ့ပိုးမစမှု
ယာဗတ်၏ ဆုတောင်းကို ဘုရားသခင်က ပေးတတ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်အတွက် အသက်ရှင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ (ယာကုတ် ၄း၂-၃)
သင်တို့သည် တပ်မက်၍ မရကြ။ လူအသက်ကိုသတ်၍၄င်း၊ အလွန်လိုချင်သော လောဘစိတ်ရှိ၍၄င်း၊ အလို မပြည့်စုံနိုင်ကြ။ ရန်တွေ့ခြင်း၊ စစ်တိုက်ခြင်း ကိုလည်း ပြု၍ မရကြ။ အကြောင်းမူကား၊ ဆုမတောင်းဘဲ နေကြ၏။ ဆုတောင်းလျှင်လည်း ကာမဂုဏ် ခံစားစရာဘို့ ရှိစေခြင်းငှါ၊ အလွဲ တောင်းသောကြောင့် မရကြ။ (ယာကုတ် ၄း၂-၃)
ကျွန်တော်နဲ့ ခင်ဗျားတို့ ဟာ ယာဗတ်မဟုတ်ကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ယာဗတ်လို ကျေနပ်မှုမရှိဘဲ ကျော်လွှားဘို့တော့ ဘုရားသခင်က လိုချင်ပါတယ်။
အသင်းတော်ရဲ့ အခြေအနေကို ကျေနပ်နေသလား။
ပိုမိုပြီး ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ခံစားရစေဘို့ လက်ရှိ အခြေ အနေထက် ပိုမိုပြီး ဝမ်းမြောက်စရာ ခံစားရစေဘို့ ယာဗတ်ကဲ့သို့ ကြိုးစား ဆုတောင်း၍ အောင်မြင် မှုကို ရယူကြပါစို့။
ဘုရားသခင် ကောင်းကြီး ပေးပါစေ။
နောက်ကျသော အဖြေသည် ငြင်းပယ်ခြင်း မဟုတ်ပါ။
Posted in: တရားေဟာခ်က္.	Tagged: ဆုေတာင္း.	Leaveacomment
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်တော်တို့၏ ဆုတောင်းခြင်းများကို အမြဲတမ်းအဖြေပေးနေပါသည်။ သို့သော် ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်သလို၊ ကျွန်တော်တို့ လိုချင်သလိုတော့ အမြဲတမ်း မဖြစ်နိုင်ချေ။ ဘုရား သခင်သည် မြန်မြန်အဖြေပေးသည်ဆိုသည်မှာ တစ်ခါတစ်ရံမျှသာ ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ဖန်ဆင်း ခြင်းပင်လျှင် အချိန်နှင့် အလုပ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အားလုံးကို တချိန်တည်းမှာ ပင်း အလုံးစုံတို့ကို ဖြစ်စေဟူ၍ မဖန်ဆင်းခဲ့ပါ။ သူခွဲခန့်သော အချိန်အတွင်မှာပင် ကလေးတစ်ဦးကို မွေးဖွားစေခြင်း၊ ပန်းကလေးတစ်ပွင့်၊ သစ်ပင်တစ်ပင်၊ နေ၀င်ချိန် တို့ကိုသာမက မြက်ပင်ကလေး တပင်ကိုပင်လျှင် အချိန်နှင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ထွန်းစေခဲ့ပါသည်။ ဘုရားသခင်ကို တွန်းအားပေး၍ မရပါ။ သတ်မှတ် ထားသော အချိန်ကို စောင့်ဆိုင်းဘို့ လိုအပ်ပါသည်။
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်တော်တို့အတွက် ကောင်မွန်သင့်တော်သော အဖြေများပေးရန် အခြေအနေ တစ်ခု တည်ဆောက်ပြီး စောင့်ဆိုင်းနေခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ကျမ်းစာထဲတွင် အမိဝမ်းတွင်းမှာကတည်းက မျက်စိကန်းနေသူတစ်ဦး ရှိပါသည်။ သူ၏ ဘ၀အသက်တာ တစ်လျှောက် လုံးတွင် မျက်ကန်းစိကန်းသူတစ်ဦးအဖြစ်သာ သိမှတ်ထားကြလေသည်။ တစ်နေ့သောအခါ သခင် ယေရှုက ထိုသူကို မျက်စိပြန်မြင်ရစေရန် ထူးခြားဆန်းကြယ်စွာ ပြုလုပ်ပေးလိုက်လေသည်။ ထိုအရာကို ဘုရားသခင်၏ အမှုတော် ထင်ရှားစေရန် ဖြစ်သည်ဟု ယော ၉း၃ကဆိုထားပါသည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်တွင် ဘုရားသခင်က ဘုန်းတော်ထင်ရှားရန်အတွက် အချိန်အတန်ကြာယူခဲ့သည်ကို တွေ့မြင်ရပါသည်။ သူသည် မည်သည့်အချိန်ကတည်းက စတင်ဆုတောင်းခဲ့သည်ကို မသိသော်လည်း ငယ်စဉ်ကတည်းက ကန်းလာသူကို အသက်အရွယ်ရောက်ချိန်အခါမှ အဖြေပေးခဲ့သည်။ ထိုအဖြစ် အပျက်ကဲ့သို့ပင် သင်ဆုတောင်းသောအရာများကိုလည်း ဘုရားသခင်က ပေးသင့်သည်ဟု သတ်မှတ် သောအချိန်၊ မှန်သောအချိ်န်ရောက်သောအခါ အဖြေပေးတော်မူလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ အဖြေမရမှာကို စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့မှုများနှင့် သံသယများ မရှိကြပါနှင့်။ ဘုရားသခင်သည် သင့်တောင်းလျှောက်မှုကို အဖြေပေးတော်မူပါလိမ့်မည်။ ရုတ်တရက် ချက်ခြင်း ဖြစ်မလာသည့်တိုင် အဖြေကို ဘုရားသခင်ထံ အားကို မျှော်လင့်ခြင်းများဖြင့် စောင့်မျှော်နေပါ။ ဘုရားသခင်ကို အားကို မျှော်လင့်လျှက်ရှိသော သင်၏ မနက်ဖြန် နေ့ရက်များသည် ၀မ်းမြောက် ခြင်းများ ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။
ဆုတောင်းခြင်းနှင့် အစာရှောင်ခြင်း အဓိပ္ပါယ်
ဆုတောင်းခြင်းနှင့် အစာရှောင်ခြင်းသည် ဆန္ဒအလျှောက် အစာမစားဘဲ ဘုရားသခင်နှင့် မိတ်ဿဟာ ရဖွဲ့ကာ ဆုတောင်းခြင်းအမှုကို အာရုံပြုလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆုတောင်းခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းကို အဖွဲ့လိုက် အတူတကွ လုပ်ဆောင်လေ့ရှိသော်လည်း အမြဲတစေ ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်း မရှိကြပါ။ အစာမ ရှောင်ဘဲနှင့်လည်း ဆုတောင်းနိုင်ပါသည်။ အစာရှောင်ပြီး ဆုမတောင်းသူများလည်း ရှိပါသည်။ သို့သော် အကျိုးသက်ရောက်မှု အပြည့်အ၀ ရှိနိုင်ရန် ထိုလုပ်ဆောင်မှု နှစ်ခုစလုံးကို အတူတကွရန်လိုအပ်ပါသည်။ အစာရှောင်ခြင်းနှင့် ဆုတောင်းခြင်း ကို ဆက်ကပ်ပြုလုပ်ရာတွင် ကျွန်တော်တို့၏ ဆန္ဒအတိုင်း ဖြစ်လာရန် ဘုရားသခင်ကို ကြိုးကိုင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ လိုအပ်နေသော ညဏ်ပညာ၊ ခွန်အားနှင့် ကျွန် တော်တို့၏ လိုအပ်မှုများရရှိနိုင်ရန် ဘုရားသခင်ကို ပိုမိုပြီး အမှီပြုအားထားရန်၊ မိမိအနေဖြင့် ဘုရာသခင် နှင့် ပိုမိုနီးကပ်လာရန် ခွန်အားယူခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
အစာရှောင်ခြင်းနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး ကျမ်းစာထဲမှာ ဘာပြောသလဲ
ဓမ္မဟောင်းပညတ်တော်တွင် ကာလတွင် ဆုတောင်းခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းကို အချိန်အခါအလျှောက် အပြစ်ပြေရာ နေ့အဖြစ် လုပ်ဆောင်ကြသည်။ ဤဓလေ့ထုံးစံကို အစာရှောင်ရာနေ့အဖြစ် သိကြပါသည် (ယေရမိ ၃၆း၆)။ မောရှေသည် ဘုရားသခင်ထံမှ ပညတ်တော်ကျမ်းများကို ရယူသည့် အချိန်က သိန တောင်ပေါ်တွင် ရက်ပေါင်း (၄၀) အစာရှောင် ခဲ့ပါ သည် (ထွက်မြောက်ရာ ၃၄း၂၈)။ ရှင်ဘုရင် ယောရှ ဖတ်သည် မောဘလူမျိုးနှင့် အာမောရိလူမျိုးများကို တိုက်ခိုက်ရန် ဣသရေလလူမျိုးများကို အစာရှောင်ရန် ကြေညာ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါသည် (၂ချုပ် ၂၀း၃)။ ယောန၏ တရားဟောချက်ကြောင့် နိနေဝေမြို့သားတို့သည် လျော်တေအ၀တ်ကို ၀တ်ကာ အစာရှောင်ခဲ့ကြပါသည်။ (ယောန ၃း၅)။ အစာရှောင်ခြင်းကို သောက ဝေဒနာရှိနေသောအချိန်များနှင့် ပြဿနာများရှိသောအချိန်တွင်လည်း ပြုလုပ်ကြပါသည်။ ဒါဝိတ်သည် ရှောလုနှင့် ယောနသန်တို့ အသတ်ခံရသော အချိန်တွင် အစာရှောင်ခြင်းအမှုပြုခဲ့သည် (၂ရာ ၁း၁၂)။ နေဟမိသည် ယေရုရှလင်မြို့ ကြီး ပျက်စီးနေချိန်တွင် အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းအမှုပြုခဲ့သည်။ ပါရှားတိုင်ပြည်၏ ရှင်ဘုရင် ဒါရိမင်းကြီးသည် တစ်ညလုံး အစာမစားဘဲ အစာရှောင်က ခြင်္သေ့တွင်း ထဲအချခံရသော ဒံယေလအတွက် ၀မ်းနည်းပူဆွေးမှု ဖြစ်နေခဲ့သည်။
အစာရှောင်ခြင်းကို ဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲတွင်လည်း တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အန္နသည် ဆုတောင်းခြင်း အစာရှောင် ခြင်းကို ဗိမ္မာန် တော်တွင် အမြဲပြုနေသည်ဟု ဆိုထားပါသည် (လု ၂း၃၇)။ ဗတ္တဇံဆရာ ယောဟန်၏ နောက်လိုက် တပည့်တော်များသည် အစာရှောင်ခြင်းပြုလုပ်ကြသည်။ ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင် စာတန် ၏ စုံစမ်းဖြားယောင်းမှု ရောက်မလာမီ အစာရှောင်ခြင်း အမှုကို ပြုခဲ့သည် (မဿဲ ၄း၂)။ အန္တိအုတ် အသင်းတော်လည်း အစာရှောင်ခြင်းပြုလုပ်ခဲ့သည် (တမန် ၁၃း၂)။ ရှင်ပေါလုနှင့် ဗာနဗကို သာသနာ ပြုခရီးစဉ်စေလွှတ်ရန်အတွက် အစာရှောင်ခြင်းအမှုကို ပြုလုပ်ခဲ့သည် (တမန် ၁၃း၃)။ တမန်တော်ကြီး ရှင်ပေါလုနှင့် ဗာနဗတို့သည် အသင်တော် ဦးဆောင်သူများကို ရွေးချယ်ခွဲခန့်ပြီး အစာရှောင်ခြင်းအမှုကို ပြုကာ အသင်းတော်ကို ဘုရားသခင်ထံ အပ်နှံခဲ့သည်။ (တမန် ၁၄း၂၃)
မောရှည်သည် သိနာတောင်ပေါ်တွင် ပညတ်တော်ဆယ်ပါး သွားရောက်ယူသည့်အခါ ရက်ပေါင်း လေးဆယ် အစာရှောင်ခဲ့သည်။ (ထွက် ၃၄း၃၈)။ ထို့အတူ သခင်ယေရှုခရစ်တော် စာတန်၏ စုံစမ်း သွေးဆောင်ခြင်း မခံမယူမီ အစာမစားဘဲ ရက်လေးဆယ် နေခဲ့သည် (လုကာ ၄း၂)။ ဒံယေလက အသီးအနှံကိုသာ သုံးဆောင်ကာ ဆယ်ရက်လုံး နှင့် နောက်တစ်နေရာတွင် နှစ်ဆယ်တစ်ရက် ခြိုးခြံ ခြင်းအမှုဖြင့် အစာရှောင်ခဲ့ပါသည်။ အရသာရှိသော အသားများနှင့် အချိုရည် (သို့) စပျစ်ရည်ကို မသုံး ဆောင်ဘဲနေခဲ့သည် (ဒံယေလ ၁၀း၃)။ ထို့ကြောင့် အစာရှောင်ရာတွင် မည်မျှအစာရှောင်ရမည်ဟု ကန့်သတ်ထားခြင်း မရှိပါ။ မိမိတတ်နိုင်သလောက် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ တစ်ရက်သာ တတ်နိုင်ပါက တစ်ရက်၊ နေ့တစ်ဝက် ခန့်သာ တတ်နိုင်ပါက နေ့တစ်ဝက် အစာရှောင် ဆုတောင်းခြင်းအမှု ပြုလုပ်နိုင် ပါသည်။
အစာရှောင်ခြင်း အမျိုးအစားမည်မျှ ရှိပါသနည်း။
သမ္မာကျမ်းစာအရ အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်း ပုံစံတစ်မျိုးနှင့် တစ်မျိုး ကွဲပြားခြားနားစွာ တွေ့နိုင်ပါသည်။ ၄င်းတို့မှာ
အစာလုံးဝမစားဘဲ နေသည်။ သို့သော် အရည်တစ်မျိုးမျိုး ကိုသုံဆောင်နိုင်သည်။ မဿဲ ၄း၁-၂ နှင့် လုကာ ၄း၂တို့တွင် ယေရှုခရစ်သည် အစာအဟာရကို သုံးဆောင်တော်မမူ ဟုရေးသား ထားသောကြောင့် အရည်တော့ သောက်သုံးသည်ဟု သုံးသပ်ရပါသည်။
အစာလည်းမစား၊ ရေလည်းမသောက်သော အစာရှောင်ခြင်းမျိုးလည်း ရှိပါသည်။ ဧသတာ ၄း၁၆ နှင့် ဧဇရ ၁၀း၆တို့တွင် မုန့်ကိုလည်းမစား ရေကိုလည်း မသောက်ဘဲ သုံးရက်တိုင်တိုင် အစာရှောင်သည်ဟု ဖေါ်ပြထားပါသည်။ တမန်တော်ကြီး ရှင်ပေါလုလည်း သုံးရက်တိုင်တိုင် အစာမစား ရေမသောက်ဘဲ နေခဲ့သည် (တမန် ၉း၉)
အရသာ မရှိသော အစားအသောက် အချို့ကို သတ်မှတ်ထားသည့် ရက်အတွင်း မသုံးဆောင် ဘဲ နေခြင်းဖြင့် ဆုတောင်းနိုင်ပါသည်။ အစာစားသုံးသော်လည်း အစာရှောင်ခြင်း အမျိုးအစား တွင် ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ကျမ်းစကားအရ ခြိုးခြံခြင်း ပြုသည် ဟုခေါ်ဆိုပါသည် (ဒံယေလ ၁၀း၂)။ ဒံယေလသည် ဤနည်းဖြင့် အစာရှောင် ခြင်းကိုပြုလုပ်ပါသည် (ဒံယေလ ၁း၁၅၊ ၁၀း၂-၃)
ဆုတောင်းခြင်း အစာရှောင်ခြင်းနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး လိုအပ်ချက် (သို့) တိုက်တွန်းချက်
နှုတ်ခပတ်တော်တွင် ဆုတောင်းခြင်းအစာရှောင်ခြင်းအမှု ပြုလုပ်ရန် အတင်းအကျပ် အမိန့်ပေးထားခြင်း မရှိပါ။ တစ်ချိန် တည်းမှာပင် ဆုတောင်းခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းကိုလည်း ကျမ်းစာထဲတွင် အသေအချာ ပင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အခါအားလျှော်စွာ လုပ်ဆောင်သင့်သည်ဟု တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ အစာရှောင်သည် ဆိုရာတွင် အစာမစားဘဲနေခြင်းကို ဦးစားပေးခြင်းအားဖြင့် စစ်မှန်သောအစာရှောင်ခြင်း မှ ဝေးကွာသွားပေလိမ့်မည်။ ခရစ်ယာန်များ၏ အစာရှောင်သော ရည်ရွယ်ချက်သည် မိမိ၏ အာရုံအတွေး ထဲမှာရှိသော ရရှိလိုသည့် လောကအရာများကို ဦးစားပေးခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဘုရား သခင် ပေါ်တွင်သာ အာရုံပြုထားရန် ဖြစ်သင့်ပေသည်။ အစာရှောင်ရာတွင် အမြဲတမ်း အချိန်ကို ကြိုတင်သတ်မှတ် ထားရ မည်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အစာမစားသည့်အချိန်ကို ခံနိုင်ရန်ပေါ်တွင်မူတည်၍ တိုး၍ တိုး၍ သတ်မှတ်ခြင်း ဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်၏ ခံနိုင်ရည်ကို ပျက်စီးသွားစေနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အစာရှောင် ခြင်းသည် မိမိ၏ ကိုယ်ခန္ဓာကို အပြစ်ပေးသည့် စနစ်လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ အလားတူ အစာ ရှောင်ခြင်းသည် ခန္ဓာအတွက် တစ်စုံတစ်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိစေရန် မလုပ်ဆောင်ရပါ (ဥပမာ – ၀သောသူများ ပိန်စေရန် လုပ်ဆောင်မှု)။ အဓိကအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့၏ အစာရှောင်ခြင်း ရည်ရွယ် ချက်သည်။ ဘုရားသခင်နှင့် ပိုမိုနီးကပ်ရန်နှင့် ပိုမို မိတ်ဿဟာရ ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
သမ္မာကျမ်းစာနှင့်ညီသော အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်စေရန် မိမိလိုချင် (သို့)လိုအပ်သော လောကအ ရာများကို အာရုံမှ ဖယ်ရှားရာတွင် ခရစ်တော်ကို ဗဟိုပြုကာ အာရုံစိုက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အောက်ပါကျမ်း ပိုဒ်ထဲတွင်
“သင်တို့သည် အစာရှောင်ခြင်းအကျင့်ကို ကျင့်သောအခါ ဟန်ဆောင်တတ် သောသူတို့ နည်းတူ မျက်နှာ ညှိး ငယ်ခြင်း မရှိကြနှင့်။ ထိုသူတို့သည် မိမိ တို့အစာရှောင်သည်ကို လူများတို့ ထင်ရှားစေခြင်းငှါ၊ မိမိတို့ မျက်နှာကို ဖျက်တတ်ကြ၏။ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား သူတို့သည် မိမိတို့ အကျိုးကို ခံရကြ၏။ သင်သည် အစာရှောင် သောအခါ အစာရှောင်သည်ကို လူများ တို့ရှေ့မှာ မထင်ရှားစေဘဲ၊ မထင်ရှားသောအရပ်၌ ရှိတော်မူသော သင်တို့ အဘ ရှေ့တော်၌သာ ထင်ရှားစေခြင်းငှါ၊ ခေါင်းကို လိမ်းကျံလော့။ မျက်နှာ ကိုလည်း သစ်လော။ မထင်ရှားသော အရာကို မြင်တော်မူသော သင်တို့ အဘသည် အကျိုးကို ထင်ရှားစွာပေးတောမူလတံ့။” (မဿဲ ၆း၁၆-၁၈)
ဆုတောင်းခြင်း အစာရှောင်ခြင်းဖြင့် ဘာတွေကို ဖြစ်စေမလဲ။
အစာရှောင်ခြင်းနှင့် ဆုတောင်းခြင်း ပြုလုပ်သမျှအချိန်တိုင်း အစာရှောင်ဆုတောင်သူ၏ အလိုဆန္ဒ တောင့်တချက်များ အလိုလို ပြည့်စုံသွားရမည်၊ သေချာပေါက် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ရှိစေရမည် ဆိုသည်မှာ မဖြစ်နိုင်ပါ။ အစာရှောင် ဆုတောင်သည်ဖြစ်စေ၊ အစာမရှောင်ဘဲ ဆုတောင်းသည်ဖြစ်စေ အလိုတော်နှင့်ညီသော တောင်းလျှောက်ချက်များကို တောင်းလျှောက်လျှင် အဖြေပေးမည်ဟု ဂတိပြု ထားပါသည်။
ငါတို့သည် ဘုရားသခင်ထံတော်၌ ရဲရင့်ခြင်းအကြောင်းဟူမူကား ငါတို့သည် အလိုတော်နှင့် အညီ တစ်စုံတစ် ခုသော ဆုကို တောင်းလျှင် ဘုရားသခင် သည် နားထောင်တော်မူ၏။ ဆုတောင်းသမျှသော စကားတို့ကို နားထောင် တော်မူသည်ကို ငါတို့သိလျှင် အထံတော်၌ တောင်သောဆုတို့ကို ရမည်ဟု သိရကြ၏။ (၁ယော ၅း၁၄-၁၅)
သင်အစာရှောင် ဆုတောင်ရာတွင် တောင်းသောအရာများသည် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင့် ညီ (သို့) မညီ ကို မည်သို့ သိနိုင်ပါမည်နည်း။ သင်သည် အစာရှောင်ဆုတောင်ရာတွင် ဘုရားသခင်ကို ရိုသေလေး မြတ်မှုနှင့် ဘုန်တော်ထင်ရှားရန် ပြုလုပ်နေပါသလား။ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ကို သင့်အတွက် ကျမ်းစာက အမှန်တကယ် ဖွင့်ပြပါသလား။ ကျွန်တော်တို့ ဘ၀အတွက် ဘုရားသခင် အလိုတော်ရှိသော အရာ (သို့) အလိုတော်မရှိသောအရာတို့ကို ကျွန်တော်တို့ ဆုတောင်းခဲ့ပါက အစာရှောင်သည်ဖြစ်စေ မရှောင်သည်ဖြစ်စေ ဘုရားသခင်က ပေးမည်မဟုတ် ဟုဆိုလျှင် ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်ကို မည်ကဲ့သို့ သိနိုင်ပါမည်နည်း။
အထက်ပါမေးခွန်းများအတွက် ဘုရားသခင်က ညဏ်ပညာကို တောင်းခံလျှင် ပေးမည်ဟု ကတိပြုထား ပါသည်။ ရှင်ယာကုတ် ကျမ်းတွင်
သင်တို့တွင် တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူသည် ပညာကိုလိုလျှင် ကဲ့ရဲ့ပြစ် တင်ခြင်းကို ပြုတော်မမူဘဲ ခပ်သ်ိမ်းသောသူတို့အား စေတနာစိတ်နှင့် ပေးသနားတော်မူသော ဘုရားသခင်ကို တောင်းစေ။ တောင်းလျှင်ရ လိမ့်မည်။ (ယာကုတ် ၁း၅)
Posted in: က်မ္းစာေလ့လာျခင္း.	Tagged: ဆုေတာင္း, အစာေရွာင္.	Leaveacomment
အစာလုံးဝမစားဘဲ နေသည်။ သို့သော် အရည်တစ်မျိုးမျိုး ကိုသုံဆောင်နိုင်သည်။ မဿဲ ၄း၁-၂ နှင့် လုကာ ၄း၂ တို့တွင် ယေရှုခရစ်သည် အစာအဟာရကို သုံးဆောင်တော်မမူ ဟုရေးသား ထားသောကြောင့် အရည်တော့ သောက်သုံးသည်ဟု သုံးသပ်ရပါသည်။
အစာလည်းမစား၊ ရေလည်းမသောက်သော အစာရှောင်ခြင်းမျိုးလည်း ရှိပါသည်။ ဧသတာ ၄း၁၆ နှင့် ဧဇရ ၁၀း၆ တို့တွင် မုန့်ကိုလည်းမစား ရေကိုလည်း မသောက်ဘဲ သုံးရက်တိုင်တိုင် အစာရှောင်သည်ဟု ဖေါ်ပြထားပါသည်။ တမန်တော်ကြီး ရှင်ပေါလုလည်း သုံးရက်တိုင်တိုင် အစာမစား ရေမသောက်ဘဲ နေခဲ့သည် (တမန် ၉း၉)